Ciidammada Eritrea Iyo Kuwa TPLF Oo Lagu Eedeeyay Dil Iyo Kufsi Ay Ka Geysteen Xeryo Qaxooti – somalilandtoday.com
Ciidammada Eritrea Iyo Kuwa TPLF Oo Lagu Eedeeyay Dil Iyo Kufsi Ay Ka Geysteen Xeryo Qaxooti
(SLT-Nairobi)-Askarta Eritrea iyo maleeshiyada Tigreega ayaa kufsi, xabsi iyo dil u geystay qaxooti Eritrean ah oo ku sugnaa gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigray, sida ay saaka sheegtay hay’ad caalami ah oo ilaalisa xuquuqda ee Human Rights Watch.
Warbixinta Human Rights Watch ayaa faahfaahin ka bixisay weerarro ka dhacay agagaarka laba xero oo ku yaalla Tigray, halkaas oo ciidammada TPLF ay kula dagaallamayeen dowladda Itoobiya iyo xulafadeeda Eritrea tan iyo bishii November ee sannadkii hore, waxaana dagaalkaas uu ahaa iska horimaad ruxay gobolka Geeska Afrika.
Tobannaan kun oo qaxooti Eritrean ah ayaa ku nool gobolka Tigray, oo ah gobol buuraley ah oo sabool ah, ayna ku nool yihiin ilaa 5 milyan oo qof.
“Dilalkan foosha xun, kufsiga, iyo dhaca loo geysto qaxootiga Eritrea ee Tigray waa dembiyo dagaal oo cad,” ayay tidhi Laetitia Bader, oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee Human Rights Watch.
Wasiirka Warfaafinta Eritrea kama soo jawaabin xiriir lala sameeyay oo u aaddan eedeeynta xadgudubyadan, laakiin Eritrea ayaa horay u beenisay xasuuqa lagu eedeeyay, waxayna sheegtay in ciidammadoodu aysan beegsan dadka rayidka ah.
Afhayeen u hadlay Jabhadda Tigreega ayaa sheegay in ciidamada Tigreega ay mar dhow soo galeen meesha ay ka dhaceen dambiyadan, wuxuuna intaa ku daray in bil ka hor ciidammo badan oo Eritrean ah ay ku sugnaayeen goobaha gaboodfalkan ka dhacay.
Ka hor colaadda Tigray, Itoobiya waxay martigelisay ku dhawaad 150,000 oo qaxooti Eritrean ah, kuwaas oo ka soo qaxay saboolnimada iyo xukun kaligi talis ah.
Inta badan warbixintu waxay diiradda saartay laba xero ee kala ah Shimelba iyo Hitsats – oo la burburiyay intii dagaalka socday.
HRW waxay soo xigatay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo sheegtay 7,643 ka mid ah 20,000 oo qaxooti ah oo markaas ku noolaa xeryaha Hitsats iyo Shimelba weli la la’yahay.